Unique ethokomele Apartment Albatross
Svedala NV, Skåne län, i-Sweden
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Melany
Siyakwamukela efulethini lethu le-Albatross lamaphupho othando, elihlotshiswe ngemisebenzi yethu yobuciko yasebusuku. Jabulela ikhwalithi ephezulu nge-SmartTV, isiteshi somsindo se-Bose, i-WiFi yamahhala kanye nokushisisa kwangaphansi kulo lonke ifulethi.
Njengoba unekamelo lokulala elihlukile, ikhona likasofa, ikhishi nendawo yokudlela kanye nendlu yakho yokugezela enamathayela aphelele, uthole indawo ekahle enendawo yokuvakasha efanele ohambeni lwakho lwamaholide e-Skåne.
Sitholakala emaphethelweni omphakathi omncane wase-Bara onemibono engavimbekile yendawo evulekile ye-Skåne. Cishe amamitha angu-400 ukusuka endlini kune-Bara leisure pool kanye nenkundla yethenisi kanye nepaki yokushibilika encane. Kukhona nemakethe yePizzeria ne-ICA kanye namakhemisi.
Ngendawo yethu ekahle, unesiqalo esihle kakhulu sokuthola izinto ezikhangayo nezigigaba ze-Skåne, kusukela ku-Nature Experience, Amadolobha Amadala Namanje, amabhishi amahle kuya esigodini samaViking kanye ne-Moose Safari. Zama izinhlobonhlobo zezifundo zegalofu noma wenze uhambo lokudla udlule e-Skåne.
Imizuzu eyi-10 nje ukusuka kithi kukhona i-Torup Castle ehlanganiswe nehlathi le-beech elimangalisayo elinemizila yokuhamba ngezinyawo kokubili okufushane nokude. Kungani ungagijimi umjikelezo kumathrekhi adumile? Qedela ngekhofi endaweni efana nenqaba.
Zitholele ukwehluka kwezifundo zegalofu ezitholakala e-Skåne. Uzothola izinkundla zegalofu ezingafika kwezingama-20 endaweni engamakhilomitha angama-30. I-PGA Golf Course enezimbobo ezingama-45 eBara!
Siyajabula ukukutshela kabanzi mayelana nezindawo zokuvakasha ezidumile nezifihliwe.
Sihlala endlini eyodwa ukuze ukwazi ukusifinyelela 24/7. Singakusiza ukuthi uhlele uhambo lwakho nokuzidela ngesikhathi uhlala.
UMelany Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Svedala NV namaphethelo